Sanad guuradii 25-aad ee geeridii Jeneraal M F Caydiid | KEYDMEDIA ONLINE
Sanad guuradii 25-aad ee geeridii Jeneraal M F Caydiid
Waxa ay maanta ku beegan tahay Sanad guuradii 24-aad ee ka soo wareegtay geeridii AUN, General Maxamed Faarax Xasan (Caydiid), oo maanta oo kale 1st August 1996, ku geeriyooday Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - 24 gu’ ayaa ka soo wareegtay geeridii halgamaagii umadda Soomaaliyeed ka dul qaaday kadeedkii Kacaanka, Allaha u naxariirstii, General Maxamed Faarax Xasan (Caydiid), oo Muqdisho ku geeriyooday maanta oo kale 1st August 1996.
General Caydiid, wuxuu sanadkii 1934-kii ku dhashay bartamaha Soomaaliya, wuxuuna Waxbarashadiisa hoose ilaa sare ku qaatay magaalladda Muqdisho, ka hor inta uusan aqoon kororsi Military u aadin Rome iyo Moscow. Wuxuu ka soo shaqeeyay ciidankii ugu horreeyey ee booliiska Soomaaliyeed 50-aad-kii, kadibna kuwuu ku biiray Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay ciidanka XDS, ka hor inta aan Kacaankii Lugooyo xirin muddo Lix Sano ah, taas oo sababtay dhalashada dareenkiisii dadnimadu ku dheehneed ee ahaa inuu mar uun dalka ka xoreeyo dhiigyacabkii dalka iyo dowladnimadii dumiyay ee Maxamed Siyaad Barre.
Kadib dagaalkii Itoobiya ee 1977-kii AUN, General Maxamed Faarax Xasan (Caydiid), wuxuu noqday Danjiraha Soomaaliya u fadhiy Hindiya, hayeeshee, shan sano kadib wuxuu helay fursaddii uu mudada ku taamayay ee ahayd inuu dowladnimada dib loogu soo celsho gacmaha shacabka meeshana lagaa saaro regime-kii uu hoggaaminayay ina Siyaad Barre.
Wuxuu yabyabay, isla-markaana hoggaan u noqday, Ururkii xaq u dirirka ahaa ee United Somali Congress, (U.S.C), wuxuuna 17 June 1990-kii ka soo dhaqaaqay Mustaxiil, taas oo horseedday in wax ka yar lix bilood uu dalka kaga raacdeeyo kali-taliskii awoodda badan is biday ee MSBarre.
Wuxuu dhidibada u taagay, Isbahaysiga, Somali National Alliance (SNA) oo ay ku bahoobeen Ururo siyaasadeed oo kala duwan. Wuxuu dalka, qaaradda Africa iyo guud ahaan adduunka-ba ka badbaadiyay in dib loogu laabto gumeysi uu horkacayay Mareykanka.
Waxaa lagu xasuustaa dagaalkii ku dhawaad labaatanka saac ee xiriirka ah socday ee dagaalyahan Maxamed Faarax Caydiid uu la galay ciidamadii huwanta ahaa ee UNOSOM ee uu horkacayay Maraykanka ee loo yaqaanay Rangers-ka, Delta Force Iyo waliba kuwii Mariniska, 3-dii October.
Dhinaca Maraykanka waxaa maalintaa laga soo riday 4 diyaaradood oo ah kuwa loo yaqaan Black Hawk, waxaana laga gubay ugu yaraan 5 Beebe iyo baabuur kale oo aad u fara badan oo ay ciidamadoodu isticmaalayeen, waxaa isla goobtaas looga dilay ciidamadii Maraykanak 30 askari, inkastoo uu Maraykanku sheegaty in laga dilay 18 askari.
Dhaawaca soo gaaray ciidamda Maraykanaka, ayuu ku sheegay Admiral Johnaton Howe, in ay gaarayeen 96 asakari, waxaana nolol lagu qabtay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradihii dhulka la soo dhigay, oo lagu magcaabo Michel Durant, ahaana Kornayl ka soo qayb galay dagaalkii gacanka inkastoo la sii daayay isagoo bed qaba.
Taageerayaasha MFCaydiid, ee koofurta Muqdisho, ayaa 15 June 1995, u doortay Madaxweyne Soomaaliya, taas oo uu ku muteystay, halgalnkii lixda Sano, wuxuu maalin Arbaco ah 14 July 1996 Jananku ku dhaawacmay degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, dhaawacaas ayuuna u geeriyooday 1st August 1996, oo ku beegan maanta oo kale 24 sano ka hor, waxaana gurigiisii rasmiga ahaa loo hooyay 4 August, 1996.
Keydmedia Online, waxa ay inta lagu guda jiro todobaaadkaan daabici doontaa taariikhda iyo faa’iidooyinkii laga dhaxlay halgankii AUN, General Maxamed Faarax Xasan (Caydiid), oo intaan ka faahfaahsan.